Bandhig Dhaqameedka Caalamiga ah ee Tareenka Caalamiga ah ee Eskisehir | RayHaber
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia26 EskisehirBandhigga Wax Soo Saarka Caalamiga ah ee Wershadaha Tareenka ayaa lagu hayaa Eskişehir markii ugu horreysay
20 / 11 / 2019 26 Eskisehir, Gobolka Central Anatolia, tareenka, hawlaha, GUUD, Headline, TURKEY
Warshadaha caalamiga ah ee tareenka waxaa lagu qaban doonaa Eskisehir markii ugu horeysay
Bandhigga warshadaha tareenka, Bandhigga Kaabayaasha Wershadaha Tareenka iyo Bandhigga Teknolojiyada, oo ay soo qaban qaabin doonaan Farsamo Casri ah oo ay taageerayaan Wasaaradda Gaadiidka iyo Kaabayaasha, ayaa lagu qaban doonaa taariikhaha 14-16 April 2020 ee Eskişehir, oo ah wadnaha khadadka tareenka ee dalkeenna iyo sidoo kale warshadaha tareenka.
Ujeeddadu waa in la isu keeno dadka shacabka ah iyo waaxaha gaarka loo leeyahay ee qaybta tareenka caalamiga ah. 14-16 Ayadoo ay garab taagan tahay Wasaaradda Gaadiidka iyo Kaabayaasha, carwada ayaa waxaa lagu abaabulay Abriil 2020 iyadoo la abaabulay hay'ad casri ah oo la yiraahdo Fuarcıl ak, oo ah shirkad laga aasaasay 100% caasimada iyo gudaha dalka. TCDD Transportation Co., Rugta Wershadaha ee Ankara, Rugta Ganacsiga Eskişehir, DTD Railway Association, Ururka Rail Systems Association iyo Eskişehir Rugta Wershadaha ayaa ka mid ah hay'adaha kale ee taageera munaasabada. Carwadan, oo loo qorsheeyay in lagu qabto ka qayb galka shirkadaha 15 ee maxalliga ah iyo kuwa shisheeye ee ka socda wadamada 100 iyo in kabadan kun kun oo soo booqdeyaal ah oo ka socda 3, ayaa sidoo kale bixin doona asaaska aasaasida xiriirada ganacsi ee cusub, horumarinta xiriirka ganacsi ee jira iyo sameynta heshiisyo cusub. Tareenka ka hawlgala kaabayaasha gaadiidka ee Turkey iyo dunida, superstructure, technology, ammaanka, electrification ah, digayaan iyo IT shirkadaha, iyo sidoo kale nidaamka tareenka fudud Rail Industry Show, wada keeni doonaa saarayaasha. SMEs sameynta wax soo saar tayo sare leh waxay sidoo kale fursad u heli doonaan inay isbaraan isu soo bandhigaan carwadaan una furnaadaan adduunka.
Maalinta carwada horteeda, waxaa la qaban doonaa shir looga hadlayo kaabayaasha wadooyinka tareenka iyo mashaariicaha ku saabsan qaab dhismeedka, moodeelada maalgelinta, ilaha maaliyadeed iyo moodooyinka maalgelinta mashruuca. Shirka, kaabayaasha tareenka iyo mashariicda dhismayaasha, qaababka maalgelinta, ilaha dhaqaalaha, moodellada maalgelinta mashruuca ayaa looga wada hadli doonaa. Shirka waxaa ka mid noqon doona maareeyayaasha bangiga iyo maalgelinta, wakiilada dawladaha hoose iyo kuwa shisheeye, dawladaha hoose, la tashiga mashruuca, caymiska iyo shirkadaha sharciga. Sida ku xusan dalabka, shirarka-hal-ka-wada-shaqeyn ayaa sidoo kale la abaabuli doonaa. Shirka kadib, aqoon-isweydaarsi gooni ah ayaa lagu qaban doonaa siminaarka, halkaas oo laga wada hadli doono mowduucyo gaar ah oo waaxda ka mid ah.
Barta kaliya ee laga gooyo ee qaybta tareenka Eskişehir
Tani waa markii ugu horreysay oo munaasabad noocan oo kale ah lagu qabto Eskişehir, oo saldhig muhiim u ah jidadka tareennada oo saacado kooban ka fog tahay Ankara iyo magaalooyinka waaweyn ee waaweyn.
Metin Güler, Madaxweynaha Rugta Ganacsiga Eskişehir, wuxuu sheegay in Tareenka Raadiyaha uu muhiimad weyn u leeyahay Eskişehir Fair Congress Center iyo Eskişehir: “Eskişehir waxay leedahay faa iido juqraafi iyo dhaqan dheer oo ganacsi iyo warshadeed. Sababtaas awgeed, waa mid ka mid ah magaalooyinka soo saarta qiimaha waddankeenna. Xarunta Caddaaladda ee 'ETO TÜYAP' iyo xarunta 'Vehbi Koç Congress Center', oo sidoo kale ku taal Xarunta Eski Conehir Fair Convention Center, oo aan dhowaan dhammaystirnay, waxay bilaabeen inay u adeegaan sidii loo kordhin lahaa awoodda tartan ee magaaladeena. Dabcan, carwooyinka kasta aad ayey muhiim ugu yihiin horumarka dhaqaalaha. Eto'o TUYAP Fair Xarunta ka shaqeeya, hogaamiyaha industry ee Turkey TUYAP Fair ah, wuxuu bilaabay in uu abaabulo carwooyinka in tayada nolosha ee qaybaha badan oo kala duwan.
Mid ka mid ah sababihii ugu muhiimsanaa ee golaheena go'aansaday inuu maalgaliyo Eskişehir Fair Congress Center waa shaki la'aan warshadaha tareenka. Wasaaradda Horumarinta, oo baartey warbixintii suurtagalka ahayd ee aan u diyaarinay xarunta, waxay na siisay taageerada ugu weyn ee magaalada Anatolian. Istiraatiijiyadda diirada la saaray warbixinta suurta galnimadu waxay ahayd kutlada ay leedahay Eskişehir. Ku tabaruca awoodda ololaynta ee tareenka, duulista iyo waaxaha dhoobada ayaa loo aqoonsaday inay yihiin bartilmaameedka ugu muhiimsan ee warshadaha caddaaladda in laga sameeyo Eskişehir. Rugteenu waxay ku dhaqaaqday dadaal aad u wanaagsan si ay u abaabusho carwo caddaalad gaar ah oo loogu talagalay waaxda tareenka sidaa darteedna, Fuarcılık A. Modern Casriga ah. Soo xulay. Maaddaama TÜLOMSAŞ, warshad iyo warshado ay iska leeyihiin oo u horseeday warshadaha casriga ah ee waddankeenna, halka isgoyska kaliya ee isgoysyada tareennada dalkeenu ku yaal yihiin Eskişehir, waa natiijo dabiici ah in carwada tareenka lagu qabto Eskişehir. Dareenkan, aqalkeennu wuxuu sii wadayaa inuu gacan ka geysto aaggan istiraatiijiga ah isla markaana uu maalgeliyo horumarinta warshadaha tareenka, kuwaas oo si weyn uga qaybqaadan doona horumarka dhaqaale ee magaaladeenna iyo waddankeenna. ”
Bandhiga Wershadaha Tareenka 14-16 ee Abril 2020…
Afrika iyo Bariga Dhexe midba midka kale wuxuu la leeyahay maalgelin ballaaran…
9. Eurasia Tareenka 2021 Fair ayaa ku jira Konya…
Bandhigga Tareenka Bariga Dhexe & Afrika ee Qaahira bishii Oktoobar…
ARUS ”Kulamada warshadaha ee Tareenka Caalamiga ah B2B Meheradda…
23 Abriil Bandhiga Caruurta Caalamiga ah ee Kocaeli…
4 gudaha KBU. Injineerada Nidaamka Tareenka Caalamiga ah…
Shirka caalamiga ah ee qaybta tareenka adduunka…
T-Roc Cabriolet cusub Markii ugu horeysay ee Frankfurt
Bandhiga Wershadaha Tareenka Caalamiga ah